जीवनको नयाँ मोड :: Setopati
प्लेनमा चिकेन सुप आयो। तातो तातो सुपमा बाफ पनि आइरहेको थियो। उनले त्यो सुप विस्तारै सुरुप्प पारिन्। स्वादिलो थियो। सुपको स्वादसँगै आफ्नो गन्तव्यप्रति पनि सोच्न थालिन्। सुपको स्वादसँगै आफ्नो आगामी दिनका बारेमा नै सोचाइलाई केन्द्रित गरिन्।
सोचिन्- किन होला मान्छे एक्लै भएपछि मात्र आफ्ना बारेमा सोच्न थाल्छ? करिब ५० वर्षको यो प्रौढ उमेरमा भर्खरैजस्तो सुनेको यो अपेक्षित अनपेक्षित समाचार र त्यसका लागि नै मातृभूमि अर्थात् नेपाल जान लागेको कुरा झल्यास्स सम्झिन्। अनि कल्पनालाई, सोचाइलाई केन्द्रित गरिन् भावी अवस्थाप्रति। नेपालमा प्लेनबाट झर्ने बित्तिकैको अवस्था कस्तो होला? को-को आउलान्? मैले चिनेका नै आउलान् कि अरु नै?
उनका चार जना छोरीहरु छन्। तीन वटी छोरीहरु पहिलो पतिबाट। एउटी छोरी अर्थात् सानी छोरी, पछिल्लो पतिबाट। पति शब्दले अब उनलाई कुनै रोमाञ्चकता पैदा गर्दैन। एउटा बेला थियो, पतिसँगै बसेर पनि धेरै पतिजस्ताबाट केही अनुभव संगालेकी थिइन् र प्रत्येक जवान मर्द देख्ने बित्तिकै उनमा अनौठा अनौठा कल्पनाहरु तरेली खेल्थे।
ती कल्पना भनेको क्षुधापीडित एउटा तरुणीको मनमा उठ्ने तरेलीहरु थिए। उनलाई अनौठो केमा लाग्थ्यो भने पतिसँग हुँदा पनि किन त्यस्ता अनौठा कल्पनाहरु मात्र आउँछन् कुनै जवान मर्द देख्ने बित्तिकै। जवान मर्दहरुबाट पनि एकान्त हुने बित्तिकै यस्तै अनुभवहरु व्यक्त गरिन्थे।
यसरी व्यक्त गरिने अनुभव वा भावना शिष्टतावश र औपचारिक भाषामा भनिएका अशिष्ट र अनौपचारिक कुराहरु हुन्थे। बुझ्नेले बुझ्ने र भन्नेले भन्ने संकेतका भाषामा हुन्थे। प्रायः दुई अर्थ लाग्ने गरी भनिन्थे। मनका कुरा पनि भनिने र त्यसलाई गफ नै त हो नि भने पनि हुनेगरी।
अहिले प्लेनमा पनि उनको लुगा थियो कालो सर्ट, कालो पाइन्ट, सेतो टप, पाइन्टमा सेतो बेल्ट अनि सेतो मोजासहितको सेतो नै स्पोर्टस् जुत्ता। हातका औँलाहरुमा विभिन्न खालका औँठीहरु। यसो हेरिन् अरु सिटतिर, लाग्यो धेरै प्रौढ तथा युवा आँखाहरु उनै तिर हेर्दैछन् अनि लाज मानिन् आफैँसँग।
ठिक दाहिने तिरको गोराले उनलाई ध्यान दिएर हेरेको देखेर त उनलाई लाज मात्र लागेन, त्यसतिर नै बारम्बार हेर्न मन लाग्यो। झल्यास्स भइन्, हातको सुप सेलाउन पो लागेछ। तत्काल सुरुप्प पारिन्, एकै घुट्कोमा स्वात्त निलिन्।
आफू दुई-दुई वटा पतिकी पत्नी भन्ने पनि सम्झिन् तर अहिले? आफैँमा एउटा प्रश्न तेर्सियो र तत्कालै यथार्थमा आउन आवश्यकता पर्यो किनभने अहिले अर्कै समस्या सिर्जना भएको थियो।
उनी पछिल्लो पतिको मृत्युको खबरले नेपाल जाँदै थिइन् र औपचारिकरुपमा उनलाई किरिया गर्नका लागि नै बोलाइएको थियो। एक्लै जाँदै थिइन्। यो समयको परिवर्तनसँगै आएको लैंगिक समानता थियो र महिलाले गर्न नसक्ने केही पनि छैन भन्ने एउटा उदाहरण पनि थियो। उनी छोरीहरुलाई अमेरिकामा नै छोडेर एक्लै आएकी थिइन्।
वास्तवमा कान्छी छोरीको बाबुको मृत्यु भएकाले कान्छी आउन पर्थ्यो तर उसले जाँचको बहानामा नेपाल नजाने निधो सुनाएकी थिइन्। पहिलो पतिका पट्टिका तीन जना छोरीहरुले आमाको नेपाल भ्रमणका बारेमा पटक्कै चासो देखाएनन् र त्यस्तो पिर पनि मानेनन्।
सानीले आफ्ना पिताको मृत्युमा पिर गरेजस्तो त गरिन् तर परीक्षा छोड्न नसक्ने बाध्यता देखाउँदै भनेकी थिइन्- ममी, यदि म मेरो बाबाकी एउटै मात्र छोरी रहेछु भने मेरो भागमा आउने अंश सबै बेचेर ल्याउनु होला र त्यसले यहाँ एउटा ग्यास स्टोर खोल्नु पर्ला। उसलाई के थाहा थियो भने उ उसकी बाबाकी एक्ली छोरी हुनुपर्छ र बाबाको भागमा आउने सम्पतिको मूल्यांकन नेपाली रुपैयाँ झन्डै ३ करोड जति पुग्छ।
भन्न त मान्छेले भन्थे कि उसका बाबाका कम्तिमा ५ जना जत्ति अनौपचारिक पत्नीहरु छन् र तीबाट कम्तीमा पनि ७ वा ८जना सन्तान हुनुपर्छ। उसकै आमा पनि बाबाभन्दा १५ वर्ष जेठी थिइन् र पहिलो पतिको सम्पत्तिका लागि नै बिहे गर्न हत्ते गरेका थिए।
प्लेन उडिरहेको थियो। उनी आँखा चिम्लेर आफूमा हराएकी थिइन्। अतीतमा डुबुल्की मार्दै जाँदा कतिपय विस्मृतिका खाली पानाहरुमा पनि विस्तारै अक्षरहरु स्पष्ट देखिन थाले। अरुभन्दा आफूलाई स्पष्ट रुपमा देखिने यो विस्मृत अतीतमा हराउँदा त्यही समयको सेरोफेरोमा जस्ताको त्यस्तै देखिने विशेषता अहिले यहाँ पनि सार्थक बनेको थियो।
पहिलो पति हाकिम भएर जिल्ला जिल्ला जाँदा सबै हाकिम र कर्मचारीहरुका बीचमा उनकै मात्र कुरा हुन्थ्यो रे। त्यो चर्चा उनको रुपको, उनको र उनका पतिको उमेरमा देखिने अन्तरको, उनले पाहुनाप्रति गर्ने मायालु व्यवहार समेतको हुने गर्थ्यो रे। उनलाई उनको नाममा समेत नयाँपन भएको बताउँथे रे।
खासगरी युवा हाकिमहरुमा, प्रहरी प्रमुख, सेना भएको जिल्लामा गणपति, मालपोत हाकिम, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु राति अबेरसम्म उनको पतिको क्वार्टरमा बसेर नाचगान समेत गर्थे र उनीसँग बसेर उनले बनाएको खाना खाँदाको महत्व बखान गर्थे। यो क्रम झन्डै १०-१२ वर्षसम्म चल्यो। त्यसबेला उनको उमेर १३ देखि १५ वर्षसम्मको मात्र थियो। हुन त उनले पहिलो बच्ची १४ वर्षमा पाएको पनि भन्ने गर्थिन्।
विस्मृत स्मृतिको तरेलीमा बग्दै गइन् आफैँ। अनि त्यसैबीच उनका तीन जना छोरीहरु जन्मिए र तिनको आनीबानी, शील स्वभाव सौभाग्यवश साह्रै संस्कारयुक्त रह्यो। बाबु पढेलेखेका र संस्कारयुक्त भएकाले छोरीहरुमा आमाको अनुहारबाहेक अरु झझल्को देखिएन।
वास्तवमा उनी पनि संस्कारयुक्त नै थिइन् तर पहिलो पतिको विद्वत्ताले उनलाई एकातिर किचेको थियो भने अर्कोतिर उमेरले गिजोलेको थियो। बढ्दो जवानी र त्यस्तै उमेरको मादकताको पारो उनमा बढ्दै थियो भने श्रीमानको क्षमता घट्दो मात्रामा पग्लिरहेको थियो हिमालमा ग्रिष्म र वर्षा ऋतुको हिउँझैँ।
तन्द्राझैँ तर सचेतनामा रहेकी उनी अचानक केही सम्झेझै गरी झल्यास्स भइन्। प्लेनमा केही सूचना दिइरहेको थियो र साङ्केतिक सूचनामा पेटी बाँध्ने जनाउ दिँदै थियो। उनलाई प्लेनको गडगडाहटले पनि जीवनको मोहसँग तादात्म्यता देखाएको थिएन र बेल्ट बाँध्ने जाँगर पनि पलाएन। किन बेल्ट बाँध्ने? आखिर जे हुनु छ, भइहाल्छ।
प्लेनमा नै त छु भन्ने भावनाले काम गर्दैँ थियो। पहिलो श्रीमान् हुँदा पछिल्लो जो श्रीमान् हुनुभयो, तिनलाई आफन्त र नजिकको नाताको भाइ भनेर जोगाउँदै भाइको रुपमा न्यानो माया पोखेकी थिइन्, त्यस्तै देखाएकी थिइन्। समाजको सामूहिक मनोविज्ञानले तर त्यसलाई पत्याएको थिएन। जस्तो सम्बन्ध थियो, त्यस्तै अनुमान लगाउँथ्यो।
उनको गुनासो समाजसँगै थियो, आफ्ना श्रीमानसँग बरु थिएन। उनको बाहिरी विचारमा समाजले अनावश्यक टिप्पणी गरेको थियो र नितान्त दिदी भाइको सम्बन्धलाई कर्के नजरले हेरेको थियो। अब चाहिँ उनी फिस्स हाँसिन् किनभने त्यो अनुमान एकदम ठिक थियो र उनले मात्र तत्काललाई त्यसो भनेर आफैलाई ढाँटेकी थिइन्।
सबैलाई ढाँटे पनि आफूलाई ढाँट्न सकिन्न भन्ने जो छँदैछ। त्यसैले पहिलो पतिको निधनमा उनलाई देखावटी बाहेक कुनै चिन्ता थिएन किनभने भाइको रुपमा भावी पति उनैसँग थियो। त्यो बेलाको नाटक, बनावटी आँसु, आफन्तहरुलाई दिएको स्पष्टीकरण र साख्खै भाइको नाता देखाउन लगाएको भाइटिका सम्झिन् र एउटा वेदना मिश्रित मिठासलाई घुटुक्क निलिन्।
त्यो बेला, त्यो नाता, त्यो कल्पनाको राज्य र भावी समयको नयाँ योजना। झल्झल्ती आँखा अघिल्तिर आयो, आँखा अचानक खुल्दा उनले आफूलाइ प्लेनमा नै पाइन्। त्यो बेलामा पहिलो श्रीमानको देहान्तमा देखाउने शोक बाहेक अरु कुनै चिन्ता थिएन उनको अन्तर आत्मामा।
लोकलाजका लागि पहिलो श्रीमानलाई तार्नु थियो, तारुन्जेलसम्मका लागि उनकै सतमा बसेझैँ गर्नु जरुरी थियो। तीन-तीन वटी छोरीहरुले हेरिरहेका थिए मौनताका साथ। ती बुझेर पनि नबुझेझैँ गर्दै थिए या बुझेकै थिएनन्, अहिलेसम्म पनि उनलाई रहस्य जस्तै लाग्छ किनभने तिनले बुझेजस्तो कहिल्यै गरेनन्।
सम्भवतः गाउँको समाज भए सायद त्यो सम्भव पनि थिएन, सहरमा कसैको वास्ता नहुने भएकाले कसैले पनि धेरै कुरा गरेनन् होला कि? तर कर्तव्यको कुरा जो सिकाउनु थियो। गरेझैँ देखाउनु पनि थियो। ती छोरीहरु चटक्कै छोडेर जाने अवस्था पनि थिएन र छाड्न पनि सकिँदैन थियो किनकी तिनकी माता उनी आफैँ पो थिइन् र उनका पिताको छाया अब रहेको थिएन भौतिक रुपमा।
उनको पहिलो पतिको काम समाप्त गर्नु थियो, त्यो पनि इज्जतका साथ, पुराना हाकिमको इज्जतका साथ। उनका आफन्तहरुले केही भन्न नपाउने गरी। यहाँ उनको र हुनेवाला पतिको बेग्लै बेग्लै स्वार्थले काम गरेझै लाग्थ्यो। काज क्रिया यसरी गराउनु थियो कि छोरीहरुका पिताको स्वर्ग निश्चित गराउनु थियो, उनी प्रेत योनीबाट पितृ हुनु पर्थ्यो।
वास्तवमा उनको स्वार्थ लोकलाज मान्नु थियो र छोरीहरुलाइ बाबुको माया हराएकोमा सान्त्वना दिनु पनि थियो र उनका आफन्तहरुका अघिल्तिर पतिको सम्पत्तिको सदुपयोग गरेको देखाउनु पनि थियो। यस्तो पिर परेको देखाउनु थियो कि भावी दिनमा पनि उनकै सतमा बस्ने गरी अडिग भएको देखिने गरी अनुभूत गराउनु थियो, प्रमाणित गर्नु थियो।
आज आएर सम्झँदा, त्यस्तो नाटक कसरी सम्भव भयो होला, फेरि फिसिक्क हाँसो फुस्कियो। तर यस्तो आरोह अवरोहमा तलमाथि गरिरहेकी उनको गन्तव्यको आधार अलि परै थियो। एकातिर भने भाइको रुपमा सँगै रहेको भावी पतिको चाहना भने कहिले १३ दिन बित्ला र आफ्नो लुकीछिपीको अनौपचारिक सम्बन्धलाई स्वतन्त्र सम्बन्धका साथै सामाजिक औपचारिकता दिने भन्ने थियो।
उनी सदैव निन्याउरो अनुहार लगाएर बस्न चाहन्थिन् र उ पनि सँगै उस्तै अनुहार लगाएर बस्थ्यो। तर दुवैका मनमा भावी दिनका रमाइला समयको कल्पना मात्र हुन्थ्यो। नयाँ जीवनको एउटा सुखद् अवसर अचानक आएको थियो कुनै पूर्व योजना बिना नै। अनौपचारिक जीवनबाट अचानक औपचारिक जीवनमा प्रवेश गर्ने अनौठो अवसर आएकोमा दुवैका मनमा एउटा त्राससहितको सुखद् भाव देखिन्थ्यो।
झन्डै ४८ घन्टापछि नेपालमा प्लेन उत्रने सूचना आयो आवाजमा र सङ्केतमा। ४ वटा प्लेन परिवर्तन गरेर, धेरै ठाउँमा ट्रान्जिट र अनिद्राले थकित उनलाई नेपालमा बेहोर्नु पर्ने दुःख पनि याद थियो र ती सबै कुरामा कुनै चिन्ता लिएको नदेखिए पनि नयाँ बैधव्यपनको आभासले मन चिमोटेको थियो र नेपाली परिवेशमा त्यसले नयाँ चिन्ता थपेको थियो।
पहिलो बैधव्यपनले तत्कालै जस्तो हरियाली समेटेको थियो भने यस पटकको बैधव्यपनले शिशिरको मात्र कल्पना बढिरहेको थियो। तर मनको एउटा कुनामा कतै अझै नयाँ जीवनको सुरुआत हुनसक्ने सम्भावना थियो, बाँकी थियो किनभने बिहान घुम्न जाँदा उनलाई लोभी नजरले घुरेर हेर्ने एउटा मेक्सिकन अधबैँसेको अनुहार झल्याक झुलुक जेहेनमा उदाउँथ्यो तर उमेर, छोरीहरु, वा नाति नातिनीहरुको नैतिक बन्धनले त्यो कल्पना साकार हुन्छ भन्ने बाटो देखिँदैन थियो।
एउटा कल्पनाको प्रवाहमा त्यो पनि थियो भनौँ। कतै अवचेतनमा रहेको भावना हो भनौँ। कुनै दिन पनि त्यो मेक्सिकनसँग कुनै कुरा भएको पनि होइन, मात्र महिलाको तर्फबाट सोचिएको फगत कल्पना मात्र थियो, नयाँ बैधव्यपनसँगै पलाएको नयाँ जीवनको एउटा पालुवा।
काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन रोकियो। उनको मुटु ढक्क भयो। आँखामा अचानक आँसु टिलपिल भए। आवश्यक कागजपत्र मिलाएर लाइनमा बस्नु थियो आगमन कक्षमा। त्यसपछि सामानहरु संकलन गर्नु थियो र लिन आउनेसँग रुँदैरुँदै घरसम्म जानु थियो।
यो देखाउन रुने एउटा चरित्र तयार गर्नु थियो अनि पछिल्लो प्रेमीको रुपमा जीवनमा भेटिएको मान्छेको कमी अब चाहिँ अनुभूत हुन थालेको जस्तो लागेका बुझिन्थ्यो।
सोचेभन्दा फरक स्थिति देखापर्यो। कोही चिन्तित छैनन्। मानौ कुनै शुभकार्यमा सहभागी हुन आए जस्तो पो भयो। आठ दिन भइसकेकाले सिधै उनको उपस्थिति औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो। कता-कता नआएको भए पनि हुने थियो कि जस्तो यो देखिन्थ्यो।
उनको नाममा करिब ७० रोपनी जति जग्गा दर्ता रहेछ र छोरीका नाममा ५० रोपनी जति। अरु कोही रहेनछन् उनका पत्नी वा छोराछोरी। कोही पनि रहेनछन् प्रत्यक्षरुपमा देखिन हकवाला। छोरा नहुनेका लागि भनिन्छ कि अपुताली खाने दाजुभाइ नै हुन्, तर त्यस्तो पनि कसैले भनेनन्। मानौँ त्यहाँ केही भएकै जस्तो थिएन। यथावत्।
राम्रोसँग काम सिध्याइन्। चोखो मनले नै। पहिले जस्तो देखावटी होइन। परिपक्वरुपमा सम्पत्तिको लेखाजोखा गरिन् जस्तो कि छोरीले हिँड्ने बेलामा भनेकी थिइन्। छोरीलाई फोन गरिन्। भनिन्- अब म तिम्रै बाबाको घरमा बस्ने भएँ, अमेरिका फर्किन्न। आउदिनँ अब फेरि अमेरिकातिर। बरु तिमी पनि अबको लामो गर्मी बिदामा यतै आउनु।
जीवनको नयाँ मोडमा अमेरिकाभन्दा नेपालको बसाइ नै सुखकर हुने उनले ठानिन् र अमेरिका बसाइलाई जीवनको सबैभन्दा अनुत्पादक समय पो मानिन्।
अमेरिकाको दौडधुप, इर्ष्या, अपुग, र सधैँको शरणार्थी जीवनभन्दा प्रेमीको चिनोलाई उनले मूल्यवान सम्झिइन् र पहिलो पतिको सम्पत्तिको अवशेषको रुपमा समेत यसैलाई सम्झिन्। नाता गोता र कुल कुटुम्बको लामो लहरो र आफ्नो सधैँ रानो मौरी जस्तो भूमिका सम्झदा अमेरिका नजाने निर्णय आफैलाई एकदम ठिक लाग्यो उनलाई।
अनि पहिलो पति र पछिल्लो पतिको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी कोठामा दुवै कुनामा उनीहरुको फोटो टाँसिन् शुद्ध मनले र आफैँलाई एक्लै भनिन्- तेरो देश यही हो र तेरा दुवै पति या भनौँ सबै छोरीहरुका पिताहरुको स्मृति यहीँ छ। आज उनलाई खोइ किन हो पहिलो पतिको यादले धेरै सताएको छ। दुवै पितृलोक गइसकेको दुवै पतिहरुसँग अब कुने गुनासो रहेन।
प्रकाशित मिति: ५ घण्टा पहिले
तन्द्रामा हराएको मान्छे
सेल्फिस् सिटीमा बनमान्छे
मेरो भ्रम तोडिदिनुभयो, धन्यवाद!